December 14, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 1
BOSASO(P-TIMES)- Iyadoo xeebaha Puntland ay ka socdaan jiriif iyo xaaruf balaadhan oo ay wadaan maraakiib iyo doonyo shisheeye isla markaasna dhibaato xoogan ay ku qabaan arintaasi shacabka Puntland ee ku dhaqanka deegaanada xeebaha ah ayaa waxaa kulan lagaga wada hadlay sidii loo yarayn lahaa jiriifka loona hortagi lahaa waxa uu ka dhacay badda dusheeda.
Kulankani oo u dhaxeeyey gudoomiyaha degmada Bandar Bayla Saciid Anteeno iyo qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Spain ee ku sugan ee xeebaha Puntland kana tirsan ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ee Midowga Yurub ayaa waxaa lagaga wada hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin sidii loo hortagi lahaa doonyaha iyo maraakiibta jiriifka wada.
Gudoomiye Anteeno ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku af garteen sidii loo xasilin lahaa badda Puntland loo bartilmaameedsan lahaa kooxaha jiriiflayda ah isla markaasna ay muhiim tahay in shacabka la bad baadiyo.
Waxa uu sheegay in ciidamada uu ka dalbaday in gacanta ay kusoo dhigaan cid walba oo jiriif kawada xeebaha Puntland una keenaan maamulka degmada si loo mariyo mudankooda, isagoona xusay in ay ka aqbaleen arintaas.
Xeebaha Puntland ayaa waxaa ka socda jiriif xoogan, iyadoona Puntland ay leedahay ciidamo badd kuwaas oo shacabku marar badan ay ku dhaliileen in aysan qaban shaqooyinkii loogu talagalay.
Ciidanka isbayn waxa ay ilaaliyaan maraakii tooda xaalufka ka wadda biyaha Somalia siiba puntland,waa awood sheegasho caadi ah oo muuqata,maraakiibteenna xaalufka wadda kiwii dagaalkaa ayaa waardiye ka haha we car burcad badeed aan aragno ayuu u yimid askarigaa isbaanishka ahi.